Momba anay - Hebei Weijia Metal Mesh Co., Ltd.
Hebei Weijia Metal Mesh Co., Ltd, dia orinasa mpanamboatra tariby voaforona tariby matihanina ary sehatra grilles vita tamin'ny sehatra nanomboka tamin'ny 1997. Neken'ny ISO 9001-2008 ny orinasa. 10 taona ny fanondranana traikefa amin'ny serivisy varotra tsara. Manana mpiasa eo amin'ny 230 eo ho eo izahay, tsipika milina fanoratana vy, milina fantsom-pifandraisana mandeha ho azy, milina fanapahana, milina miondrika, masinina perforating, masinina manafika, milina mihodina ary manao fikajiana robot
"Vokatra manara-penitra, amin'ny fandefasana ara-potoana sy serivisy aorian'ny fivarotana" no filozofianay momba ny orinasa.
“Mamorona lanja amin'ny fahasambarana” no kolontsain'ny orinasanay.
“Esory ny fahantrana ary ataovy tsaratsara kokoa ny fiainan'ny tsirairay” no iraka ataontsika.
● 1997 Niorina (Weijia Metal Mesh Factory).
● 2008 Makà mari-pahaizana import sy export (Hebei Weijia Metal Mesh Co., Ltd).
● 2012 Makà fanamarinana ISO 9001.
● Fitaovana famokarana mandroso 2015 sy orinasa vaovao manara-penitra ampiasaina.
● 2017 Nanomboka nandinika ny fiantrana, nanome zana-ketsa hazo fihinam-boa, karazan-kisoa sns. Amin'ny faritra mahantra.
● 2019 Fenoy ny fanavaozana ny rafitra fananana.
● 2020 Vita fanamarinana orinasa avo lenta.
* Vokatra miaraka amin'ny vidin'ny ozinina omena.
* Kalitao tsara miaraka amin'ny taratasy fanamarinana ISO 9001 hatramin'ny taona 1997.
* Ekipa mpivarotra matihanina ary mamaly haingana ny mpanjifa ao anatin'ny 12 ora.
* Ny vokatra dia azo namboarina.
* Azo ekena ny sary famantarana ny mpanjifa amin'ny vokatra.
Hatramin'ny 1997, manomboka ny asa fanamboarana vy makarakara, vy makarakara ary vy vy nohomboana izahay ho an'ny tetik'asa fananganana sy fananganana. Ny fifantohana amin'ny vokatra kalitao sy ny fandefasana fotoana dia nahazo voninahitra marobe, toa ny "Integrity Enterprise", "Factory Factory tsara", ary izahay no filoha lefitry ny "Anping County Wire Mesh Chamber of Commerce".
Mino ny orinasanay fa ny mpiasa dia harena sarobidy an'ny orinasa, ary manome lanja lehibe ny firaisan-kinan'ny mpiasa, ny fampandrosoana ny fahasalamany manokana ary ny fanatsarana ny fahaiza-manao matihanina. Ary mandrindra fananganana ekipa orinasa maro, fivoriana fifanakalozana fampiroboroboana fialam-boly manokana ary omeo fikarakarana ny mpianakavin'ny mpiasa